Vaovao - Mifantoha amin'ny hery, mandrosoa | Fihaonana famintinana faran'ny taona Lesite 2020.
Niverina ny lohataona, fanombohana vaovao ho an'ny zava-drehetra. Nokapohina ny lakolosin’ny taom-baovao, ary namela marika lalina ny kodiaran’ny fotoana. Lavitra ny taona 2020 feno fanamby sy mampanantena, ary ho avy ny taona 2021 feno fanantenana sy mahery setra. Tsy taom-baovao ho an’i Lesite ihany ny taona 2021, fa vavolombelon’ny 15 taona nivoahan’ny fampandrosoana. Ny 30 janoary 2021, ny tale jeneralin’ny Lesite, Lin Min, niaraka tamin’ny mpitantana ambony ao amin’ny orinasa sy ny mpiasa rehetra, dia nandinika ny fizotran’ny fampandrosoana tamin’ny taon-dasa ary niandrandra ny vina sy ny tanjona ho an’ny taona vaovao.
Miara-miasa mba hamoronana famirapiratana——Kabary ataon'ny mpitarika
Tamin'ny fivorian'ny famintinana faran'ny taona dia nanao famerenana famintinana avy amin'ny lafin'ny fampandrosoana ny orinasa, ny drafitry ny 5 taona, ny kalitaon'ny vokatra ary ny fitantanana 5S, ny rafi-pitantanana sy ny fitantanana orinasa. Nilaza ny filoha Lin fa ho taona miavaka ny taona 2020. Miatrika ny valan'aretina pnemonia satroboninahitra vaovao miavaka, miatrika ny tontolon'ny fandraharahana sarotra sy miovaova, ary miatrika fifaninanana ara-barotra henjana, ny Lesite dia hifantoka amin'ny fisorohana ny valan'aretina sy ny asa fandraharahana. Ny mpiasa rehetra dia miray saina, manamafy ny fahatokisany, mitambatra ho iray, mandresy ny fahasahiranana, mandalina tsara sy manomana drafitra, manitsy ara-potoana ny fandaminana ny famokarana sy ny fandidiana, manentana ny tanjaka sy ny hafanam-po amin'ny lafiny rehetra amin'ny orinasa, ary miantoka ny fiarovana ny " fisorohana ny areti-mifindra" ary ny famokarana sy ny fiasan'ny orinasa. Fampandrosoana marin-toerana sy milamina, ary nahazo vokatra tsara.
Ny taona 2021 dia taona mavesatra kokoa ho an'ny asa isan-karazany ataon'ny orinasa, ary taona manan-danja ihany koa ho an'ny fanatsarana amin'ny ankapobeny ny tanjaky ny orinasa. Antenaina fa tsy hanadino ny hetahetan’izy ireo tany am-boalohany ny sampan-draharaha rehetra, hiorina tsara sy ho lavitr’ezaka, hampihatra ireo asa sy tanjona samihafa ao amin’ny orinasa, ary hiezaka ny hanao fandrosoana eo amin’ny orinasa amin’ny taona 2021. Ny marika fampisehoana ankapobe, miara-miasa mba hahatratrarana ny tanjona. toe-javatra mandresy-fandresena, ary miara-mamorona famirapiratana, ary miara-miasa mba hamitana amim-pahombiazana ny tanjona fampandrosoana ny orinasa dimy taona.
Mamorona lanja miaraka——Fivorian'ny loka
Ny faharetana, miasa mangina. Ny Lesite dia afaka mahatratra vokatra toy izany amin'ny taona manokana 2020, ary tsy afa-misaraka amin'ny andiana mpiasa miavaka izay mazoto sy manolo-tena ary manolo-tena. Izy ireo dia mitazona toe-tsaina pragmatika, mazoto, matotra ary tompon'andraikitra amin'ny asany, manatanteraka tanjona hatrany hatrany, ary mamindra ny olona rehetra manodidina azy amin'ny hatsarany manokana.
Tongasoa mpiasa vaovao
mpiasa tena tsara
mpiasan'ny faha-10 taona
Fankatoavana manokana ny mpiasa
Ekipa tena tsara, nijinja ny voninahiny teo amin'ny tehaka ireo mpiady Lesite, nandrisika ireo mpiasan'ny Lesite maro kokoa haka ireo ho ohatra, hiady amin-kerim-po, hanatratra ny tenany ary hamorona lanja miaraka.
Fisarihana vintana, mampientam-po——Fifaninanana tsara vintana
Fifaninanana tsara vintana
Nahazo ny loka fahatelo
Nahazo ny loka voalohany
Nahazo ny loka lehibe
Tanteraka ny taona 2020 lasa teo amin’ny fahasahiranana, falifaly amin’ny firosoana, nihetsiketsika tao anatin’ny hatsembohan’ny firaisankina, misy ny zava-bita, ny tombony, ny fisafotofotoana ary ny fisaintsainana. Ny vokatra mahafaly dia manome antsika fahatokiana handroso sy hanohy hisaintsaina sy hanafaingana ny fivoarantsika. Ny hafainganan'ny fanatsarana. Amin’ny taona 2021, ny mpiasan’ny Lesite dia vonona ny handeha, hiara-hiasa, feno tanteraka ny tanjona “dingana kely ao anatin’ny herintaona, dingana lehibe ao anatin’ny telo taona, ary avo roa heny ao anatin’ny dimy taona”. Fizarana vaovao amin'ny fampandrosoana an'i Lesite!